Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Amayeza aseTshayina: I-18th World Congress iqukumbela ngempumelelo
Abasebenzi abavela kwihlabathi liphela bajoyine ngokubonakalayo nangokomzimba ukuxoxa kunye nokuphonononga uphuhliso lwexesha elizayo kunye namathuba onyango lwaseTshayina.
Iququzelelwe yi-World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS), i-18th World Congress ye-Chinese Medicine iqukunjelwe ngempumelelo kwi-Hong Kong Convention kunye ne-Exhibition Centre namhlanje. Ngophuhliso oluqhubekayo kunye nefuthe elikhulayo lamayeza aseTshayina kwiminyaka yakutshanje, kunye nokuvela kwe-COVID-19 ukusukela kulo nyaka uphelileyo, kubekho isantya kuphuhliso lwamayeza aseTshayina kunye nokudityaniswa kwamayeza aseTshayina naseNtshona kushishino lwehlabathi. Le nkongolo kulo nyaka izinyaswe ngokubonakalayo nangokwasemzimbeni ngoochwephesha bezonyango abangama-30 kunye neengcaphephe zamayeza aseTshayina ezisuka kwihlabathi liphela ukuze zitshintshisene ngezimvo zazo phantsi komxholo othi “Uncedo lwezonyango zesiNtu zaseTshayina kwiMpilo yoMntu – Amathuba kunye nemingeni yeGlobal Traditional Medicine yaseTshayina”.
I-congress icetyiswa nguLawulo lweSizwe lwezoNyango zeMveli zaseTshayina, iRiphabhlikhi yaBantu baseTshayina kunye ne-Bureau yokutya kunye neMpilo, uRhulumente weNgingqi yoLawulo oluKhethekileyo lwaseHong Kong, iRiphabhlikhi yaBantu baseTshayina; iququzelelwe yi-World Federation of Chinese Medicine Societies kwaye isingathwe yi-Hong Kong Registered Chinese Medicine Practitioners Association kunye ne-WFCMS (Hong Kong) i-Council Members Association Limited, ekwaxhaswa yiSikolo seMithi yaseTshayina, iYunivesithi yaseHong Kong; Isikolo samayeza aseTshayina, iYunivesithi yaseTshayina yaseHong Kong; kunye neSikolo soNyango lwaseTshayina, iYunivesithi yaseHong Kong Baptist.
Iindwendwe ezisemthethweni ezibandakanya uMhlonishwa uNksk Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, uMphathi oyiNtloko weNgingqi yoLawulo oluKhethekileyo lwaseHong Kong, iRiphabhlikhi yabantu baseChina, uMnu. CY Leung, GBM, GBS, JP, iSekela likaSihlalo weKomiti yeSizwe yaseTshayina. INgqungquthela yeNgqungquthela yezoPolitiko yaBantu, iRiphabhlikhi yaBantu baseChina, uMnu. Tan Tieniu, iSekela likaMlawuli we-Ofisi yoNxibelelwano lwe-Central People's Government eHong Kong SAR, uMnu. Ma Jianzhong, uMongameli we-World Federation of Chinese Medicine Societies, uNksz Feng Jiu , UMongameli osisigxina waseHong Kong obhalisiweyo we-Chinese Medicine Practitioners Association, uGqr Zhang Qi, iNtloko yeSebe lezoNyango zeMveli ye-WHO, uDkt Marco Antonio de Moraes, uMlawuli wezobuGcisa wezeMpilo kunye noMongikazi ococekileyo, iCandelo leZifo ezingapheliyo zeSebe likaRhulumente. Impilo, iBrazil kunye nenkokeli yoLawulo lweSizwe lweMithi yaseTshayina, i-PR yaseChina, yanikela iintetho ngexesha lomsitho wokuvula, kunye noNjingalwazi uSophia Chan Siu-c hee, uJP, uNobhala woKutya kunye neMpilo yeNgingqi yoLawulo oluKhethekileyo lwaseHong Kong, uDkt Chui Tak-yi, uJP, phantsi koNobhala woKutya kunye neMpilo kaRhulumente weNgingqi yoLawulo oluKhethekileyo lwaseHong Kong, PR China, uDkt. Ronald Lam, JP, uMlawuli wezeMpilo weNgingqi yoLawulo oluKhethekileyo lwaseHong Kong, iRiphabhlikhi yaBantu baseTshayina, uGqr Margaret Chan Fung Fu-chun, owayesakuba nguMlawuli-Jikelele we-World Health Organization, uMnu. Tommy Li Ying-sang, uSihlalo we-Federation of i-Hong Kong Chinese Medicine Practitioners kunye ne-Chinese Medicine Traders Association, uNjingalwazi uLyu Aiping, iDini yeSikole sezoNyango zaseTshayina, iYunivesithi yaseHong Kong yaseBhaptizi kunye noNjingalwazi Feng Yibin, uMlawuli, weSikolo sezoNyango zaseTshayina, iYunivesithi yaseHong Kong kunye bajoyine umsitho wokuvula kunye iqalise ngokusesikweni inkongolo ukulungiselela iingxoxo ezibonisa ukuqonda.
Ngaphezulu kwama-30 ochwephesha bezonyango kunye neengcali zamayeza aseTshayina bajoyine bevela kwihlabathi liphela ukuba bazimase ngokubonakalayo nangokwasemzimbeni ukuxoxa ngophuhliso lwezonyango lwaseTshayina.
Le nkongolo imema iingcali ezahlukeneyo ezaziwayo kwezonyango kunye neengcaphephe zamaShayina ezeMveli ezivela kwihlabathi liphela ukuba ziququzelele utshintshiselwano lwezemfundo, ukuze kukhuthazwe uphuhliso lwamayeza esintu aseTshayina kwinqanaba lamazwe ngamazwe, kunye nokuphucula ukuma kwamayeza emveli aseTshayina ngokunjalo nokuba negalelo ebantwini. impilo.
Ukongeza kwiingcali zelizwe kunye neHong Kong, badityaniswa neengcali ezivela eFransi, eMzantsi Afrika, eSpeyin, eThailand, eHungary, eOstreliya, eBrazil, eGrisi, kwiiPhilippines, eJapan, eFiji, eNamibia nakwamanye amazwe. ICongress ibinamacandelo amabini: iintetho eziphambili kunye neengxelo zemfundo. Umamkeli, kunye neqela leengcali zamayeza emveli aseTshayina, baxoxe ngoluhlu lwezihloko ezibalulekileyo kuphuhliso lwamayeza aseTshayina, kubandakanya: "Uphuhliso lwamva nje lwesibhedlele iTCM eHong Kong", "Indlela yokulwa i-COVID-19: impumelelo I-TCM eHong Kong", "Uvavanyo kunye nolawulo lweziphumo ebezingalindelekanga zentsholongwane ye-COVID-19 kunye nogonyo lwe-COVID-19", "Ukusetyenziswa kweTime-Space Acupuncture yeempawu ze-COVID-19 ezinde", "i-TCM ilwa ne-COVID-19 UMzantsi Afrika ", kunye "Ukuqinisekiswa kokusebenza kweklinikhi ye-arsenic trioxide kunyango lwe-leukemia", kunye nezinye ezininzi. INkongolo incede ekuphononongeni uluhlu olubanzi lwezicelo kunye neziphumo zokuchasana nobhubhane lweyeza leMveli laseTshayina, kunye namathuba ophuhliso lwexesha elizayo lwamayeza eSintu aseTshayina kwimarike yamazwe ngamazwe.